ဘရော့ဒ်ဘန်း | Holmbygden.se
Holmes ခုနှစ်တွင် broadband များအတွက်အများအပြားဖြေရှင်းချက်များမှာ, ပုံသေနှင့်မိုဘိုင်း. အောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ခရိုင်အတွင်းရှိစီစဉ်ထားတဲ့ရွေးချယ်စရာခြုံငုံသုံးသပ်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ Holmes Fiber မြန်နှုန်းမြင့် broadband မှတစ်ခုလုံးကို Holmes ချိတ်ဆက်ဖို့အလုပ်လုပ်တယ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အမှငျြ. အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, Holmes ပင်လယ်ပြင်အိပ်ရာတစ်လျှောက်လှည့်ဖျားခြင်းဖြင့်, ပြီးတော့ပြားတက် connect ကွန်ယက်အတွက်န်းကျင် RNA. အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းအကြောင်းကိုရှိပါတယ် 200 အဖွဲ့ဝင်များHolmsjönန်းကျင်ဖြန့်ဝေ. သူတို့အားအခြေစိုက်ကွန်ယက်ကိုဆိုလိုသည်မှာ System ကိုပေးသွင်း Bynet ဖြစ်ပါသည်. ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကူညီပေးသည်သောသူတို့အားဆိုလိုသည်မှာနေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါသည် (ဆောင်းဉီးရာသီ 2014).
ဆက်ဖတ်ရန်, holmbygden.se/holmfiber ချက်ချင်းအိမ်ခြံမြေintressanmäl!
တစ်မြူနီစီပယ်ကုမ္ပဏီပြိုလဲလုယူသော ServaNet 2005 ကျေးရွာများအားဖြင့်တဦးတည်းနှစ်ခုကီလိုမီတာဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ဘရော့ဘန်း Anundgård နှင့် Östbyn.
တစ်ဦးအသနားခံစာနှင့်ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှရှေ့ကေဘယ်လ်တလျှောက်တွင်ရွာသားကိုတူးကွပါနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တက်နှင့်ဆက်စပ်. ကွန်ယက်အင်တာနက်ကိုထောက်ပံ့, တယ်လီဖုန်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား (ပွင့်လင်းတီဗီ, တီဗီနှင့်အင်တာနက် TV ကို). န်ဆောင်မှုများအော်ပရေတာတစ်ခုအကွာအဝေးအားဖြင့်ကယ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်. အရာအော်ပရေတာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြည့်ပါ ServaNet factsheet.
ကြောင့် cable ကိုမှနီးကပ်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် join ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ယနေ့, တူးအရေးယူလိုအပ်သည့် access point,. အထက် Holmes Fibers စီမံကိန်းများကိုပင်ဒီဧရိယာနှင့်ဖွယ်ရှိတဲ့စျေးသက်သာဖိုင်ဘာဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်.
Servanet.se, info@servanet.se, သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့် 0200-120 035.
gtext ../ cc4e255c731835a516b71d520cc29754.png’	အကျယ် = '86’ အမြင့် = '13’ နယ်စပ် =’0′ alt = 'မေးလ်ပို့ပါ’ hspace =’0′ vspace =’0'>
Net1 ပင်ကျဲပါးလူနေထူထပ်သည့်ဒေသများတွင်ကောင်းတစ်ဦးလွှမ်းခြုံရှိသည်ဖို့လူသိများသည်. သူတို့ကစီဒီအမ်အေလို့ချေါတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုလျက်, အဟောင်းကိုခဲ့ပြီး UMT ကွန်ယက်ကိုကြိမ်နှုန်းကိုအသုံးပြုသည်. ထို့ကြောင့်ရှည်လက်လှမ်းမမီ.
ထူးခြားတဲ့အကွာအဝေးဟာ 3G ရွက်တိုင်ထက်လေးဆပိုရှည်သည်နှင့်လွှမ်းခြုံအထိနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ် 12 ပင်လယ်ကမ်းခြေမှ Mil. Holmes ၏တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်သငျသညျအသကျရှငျ, မတူညီသောလွှမ်းခြုံမြေပုံများနှင့်သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ဘို့ပဲသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်လျှင်သင်ရှုပ်ထွေးတက်လေ့.
အဆိုပါကွန်ယက်ကိုလည်းယမ်လျှောက်လုံးအခမဲ့ပါ Roaming ရှိပါတယ်. အများဆုံးမြန်နှုန်းအဆိုပါ 4G, 3G အထိတစ်သီအိုရီမြန်နှုန်းနှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ် 9,3 Mbit / s နဲ့ download speed အမြန်နှုန်းနှင့်အထိ 3,1 Mbit / s ကိုအပ်လုဒ်ကိုအမြန်နှုန်းအတွက်. အဆိုပါနှုန်းထားကိုထိုကဲ့သို့သောအချိုးအဖြစ်အများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်, အနီးဆုံးရွက်တိုင်မှ signal ကိုခွန်အားနှင့်အကွာအဝေး, နေ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူအရေအတွက်ကအချိန်. ဤနေရာတွင်လွှမ်းခြုံမြေပုံကိုကြည့်ရှုပါ.
အဓိကကမိုဘိုင်းအော်ပရေတာလည်း 3G ကနေတစ်ဆင့်မိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းပူဇော်- နှင့် 4G ကွန်ရက်များ.
ဒီနေရာတွင်မိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းများအတွက်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ '' လက်ရှိလွှမ်းခြုံမြေပုံများအားတွေ့မြင်နိုင်သည်.
- Telia (မျိုးကွဲများအပါအဝင်. Halebop) ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် 4G ကွန်ယက်ကိုရှိပြီး Tele2 နှင့်အတူ 3G ကွန်ယက်ကိုဝေမျှ. လွှမ်းခြုံမြေပုံ.
-3har ett eget 4G- နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် 3G ကွန်ယက်ကို. လွှမ်းခြုံမြေပုံ.
- Tele2 / Comviq Telenor နှင့် Telia နှင့်အတူရှယ်ယာ 3G ကွန်ယက်ကိုအတူအစိတ်အပိုင်းများ 4G ကွန်ရက်များ.လွှမ်းခြုံမြေပုံ.
- တယ်လီနော Tele2 နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများ 4G ကွန်ယက်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် 3G ကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်. လွှမ်းခြုံမြေပုံ.
(2, G / ဂျီအက်စ်အမ်: Telia ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်ကရှိပါတယ်. Telenor နှင့် Tele2 ကွန်ယက်ကိုဝေမျှခြင်း.3မပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။)
အားလုံးကအခြားအော်ပရေတာ, လည်းလျော့နည်းလူသိများ, သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ ဒီမှာ.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း subscription ကိုအပေါ်ပမာဏကို surfing မိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းများအတွက်အပိုဆောင်း subscriptions ကိုရှောင်ရှားရန်ပညာရှိဖြစ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်. စမတ်ဖုန်းတွင်, သငျသညျပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့် e-reader ကိုမှကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ function ကိုလံကြိုးသို့မဟုတ်ဟုခေါ်သည် “Wi-Fi ဟော့စပေါ့”.
18/2 -14 မိုဘိုင်းကွန်ရက်များပေါ်တွင် miljardsatsningen အပေါ် Holmes ကနေတီဗီအစီရင်ခံစာ.
မိုဘိုင်းအော်ပရေတာဥပမာအတွက်ကွန်ရက်များတည်ဆောက်ရန် miljardsatsar. တစ်ဦး. ကျဲပါးလူနေထူထပ်သောဒေသများတွင်.
ရွာသားတွေထင်သောအရာကိုအပေါ် Holmes ကနေ SVT Mittnytts အစီရင်ခံစာကိုကြည့်ပါနှင့်ပဏာမခြေလှမ်းအကြောင်းကိုယုံကြည်.
ပိုက်ကွန်နဲ့အမြန်နှုန်း – နည်းပညာနောက်ကွယ်မှ
ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်တွေနဲ့အများဆုံးအမြန်နှုန်း (အကောင်းဆုံးကိုလိုအပ်ချက်ကိုင်ဆောင်သူ): sekund နှုန်း MB / s = မီဂါဘစ် (1 byte = 8 -bits). လင့်ခ်မှာဆက်ဖတ်ရန်.
fiber optics = 1000Mbit / s ကိုအဆိုပါအော်ပရေတာများကမကြာခဏကမ်းလှမ်းခဲ့သည်. အလေ့အကျင့်၌, သို့သော်နည်းပညာကိုအလွယ်တကူ၏အမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင် 40 000Mbit / s နဲ့.
4G + = 80 Mbit / s နဲ့. ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ LTE-Advanced. “Riktig 4G”.
4, G = 40 Mbit / s နဲ့. ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ LTE ကို (3, G, DC-HSDPA Med / 3GPP-အင်ဂျင်နီယာ) သို့မဟုတ် 3.9G.
turbo-3G + = 10-32 Mbit / s နဲ့. ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ HSDPA/HSUPA, 3.5, G.
turbo-3G =6Mbit / s နဲ့. ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ HSPA, 3.5, G
3, G =2Mbit / s နဲ့. ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ UMTS, 3, G.
3, G Net က 1 = ကိုလည်းသိ စီဒီအမ်အေ EV-DO.
အစပ် (အဆင့်မြှင့်ဂျီအက်စ်အမ်) = 0,2 Mbit / s နဲ့. လည်းလူသိများ 2.5, G.
GPRS (အဆင့်မြှင့်ဂျီအက်စ်အမ်) = 0,1 Mbit / s နဲ့ (မဟုတ်မြေပုံပေါ်တွင်). လည်းလူသိများ 2.5, G.
(1, G = ဟောင်းများ ခဲ့ပြီး UMT 450- alt +. 900-ပိုက်, 2, G = ဂျီအက်စ်အမ်-ကွန်ယက်ကို။)
အဆိုပါအမြန်နှုန်းအကြောင်းပိုမို Read M.M.. ဒီမှာအမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်များအတွက်.
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် - လွှမ်းခြုံ
Mobil မဂ္ဂဇင်းအပိုဒ်များတွင်မိန့် (7/2 -14) အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်ကောင်းသောသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်မိုဘိုင်းလွှမ်းခြုံ၏နောက်ခံဖြစ်ပါသည်. ဆောင်းပါးကဒီမှာ Read.
မတူညီသောအော်ပရေတာအတွက်အခြား frequency band.
ကြိမ်နှုန်း / နည်းပညာတစ်ဝက်ကမ္ဘာကြီးကိုအသုံးပြုသောအဘယ်အရာကိုမြင်.